प्रेरणादायक कथाहरू - Getcontact
Getcontact बाट प्रेरणादायक कथाहरू !
यस पृष्ठमा रहेको सामग्री सार्वजनिक सामाजिक मिडिया पोष्टहरू र हाम्रो वेबसाइटबाट संकलित गरिएको छ।
इन्स्टाग्राम प्रयोगकर्ता @partys_style भन्नुहुन्छ कि एक व्यक्ति जसले आफूलाई बैंकको कर्मचारी भनेर प्रस्तुत गरेको थियो ऊ Getcontact मा ठग भएको पहिचान भएको थियो । उहाँले यो उल्लेख गर्नुभएको छ कि उस्तै खालका घटनाहरू उहाँलाई पहिले पनि भएका छन् र Getcontact ले उहाँलाई धेरैपल्ट जोगाएको छ । partys_styleले मान्छेहरूलाई Getcontact डाउनलोड गर्न प्रोत्साहन गर्नुहुन्छ किनभने उहाँलाई विश्वास छ कि यो अज्ञात नम्बरहरूबाट टाढा रहनका लागि एउटा पूर्ण एप हो ।
भिके प्रयोगकर्ता @Подслушано Химки भन्नुहुन्छ कि अज्ञात नम्बरबाट फोन गर्ने एक व्यक्तिले आफूलाई Sberbank को कर्मचारीको रुपमा प्रस्तुत गरेको थियो र उहाँलाई व्यक्तिगत गोपनियताको बारेमा प्रश्नहरू सोधेको थियो ।Химки ले जनाउनु भएको छ कि उहाँले यो नम्बरलाई Getcontact मा खोज्नुभयो र यसलाई "स्क्याम' मार्क गरेको पाउनु भयो तसर्थ उहाँले यो द्वेषपूर्ण फोन कललाई ब्लक गर्नुभयो ।Химки सबै रुसी नागरिकहरूलाई यस्ता अवस्थाबाट सावधान रहन अनुरोध गर्नुहुन्छ र Getcontact को प्रयोग गर्ने सल्लाह दिनुहुन्छ ।
VK प्रयोगकर्ता @Око планеты ले Getcontact लाई अज्ञात नम्बरहरू पहिचान गर्ने र यसका प्रयोगकर्ताहरूलाई स्पाम फोनहरूबाट सुरक्षा दिने एपका रुपमा व्याख्या गर्नुहुन्छ । भिके प्रयोगकर्ता उल्लेख गर्नुहुन्छ कि 2018 मा लोकप्रियता कमाएको यस एपको लाखौँ प्रयोगकर्ता छन् र जोड दिनुहुन्छ कि Getcontact एप स्टोर र गुगल प्ले स्टोरका एपहरू मध्ये उत्कृष्ट नि:शुल्क एपमा पर्छ ।
भिके प्रयोगकर्ता @ТелПоиск भन्नु हुन्छ कि Getcontact एउटा राम्रो र सहयोगी एप हो । उहाँ थप्नुहुन्छ कि यसले द्वेषपूर्ण फोन कलहरूलाई ब्लक गर्छ र यो फोन कलहरू पहिचान गर्नकालाई एक उत्कृष्ट तरिका हो ।
इन्स्टाग्राम प्रयोगकर्ता @gruzoperevozki_msk_rus ले Getcontact लाई अज्ञात नम्बरको मालिक पहिचान गर्न र तपाईंलाई ठगीबाट बचाउन सिफारिस गर्नुहुन्छ ।
एक iooo.ru प्रयोगकर्ता ले उल्लेख गर्नुभएको छ कि उहाँले एउटा पुरानो कार किन्दा आधिकारिक सेवा प्रदायकको रुचीको क्षेत्रमा पर्नुभयो र फोरमको वेवसाइटमा साइन इन गर्नुभयो । यस्ता फोन कलहरूबाट छुटकारा पाएकोमा उहाँ Getcontact लाई धन्यवाद दिन चाहनुहुन्छ र सबैलाई आफ्नो सहमति बिना सूचना अरुलाई बाँड्ने वेवसाइटहरूको विरुद्धमा Getcontact प्रयोग गर्ने सल्लाह दिनुहुन्छ ।
MigReview को एक पोष्टमा,उल्लेख गरिएको छ कि Getcontact ले टेलीमार्केटिङ फोन कलहरू, कथित सेवाहरूका लागि फोन कल, आदि जस्ता द्वेषपूर्ण फोन कलहरूको पहिचान गरेर तपाईंको समय वचत गर्छ ।
भिके प्रयोगकर्ता @Признание Благовещенск भन्नुहुन्छ कि उहाँले एक निजी खाताबाट भेट्न चाहन्छु भन्ने एक महिलाको संदेश प्राप्त गर्नु भयो । सुरुमा उनले एक गम्भीर सम्बन्धमा रहन चाहेको बताइन् तर पछि पैसा माग गर्न थालिन् । र जब उहाँले Getcontact मा खोजी गर्नुभयो तब उक्त नम्बर "पैसा स्क्यामर" को रुपमा ट्याग भएको देख्नुभयो । उनको कथालाई विश्वसनीय नलागे पनि उहाँ थप्नुहुन्छ कि धेरै मान्छेहरू यो जन्जिरमा फस्न सक्छन् ।
इन्स्टाग्राम प्रयोगकर्ता @mary_ramon Getcontact को सहयोगले आफू कसरी बीमा कम्पनीहरूबाट बारम्बार आउने फोन कलहरूबाट छुटकारा पाएँ भनेर बताउनुहुन्छ । अरु प्रयोगकर्ताले आफूलाई कसरी हेर्छन् भन्ने पनि आफूले हेर्न सक्ने कुरालाई जोड दिंदै mary_ramonभन्नुहुन्छ कि उहाँ कहिलेकाहीँ हास्यास्पद अभिव्यक्तिहरू देख्नुहुन्छ ।
भिके प्रयोगकर्ता@ЧЕРНЫЙ СПИСОК ले भन्छ कि एउटा नम्बरले उसलाई भर्खरै कल गरिरहेको छ र धम्की सन्देशहरु पठाईरहेको छ । जब उसले Getcontact मा नम्बर सर्च गर्छ, उसले भेट्छ कि यो नम्बरले अरु मान्छेहरुलाई पनि दुख दिइरहेको छ ।
४ करोड भन्दा बढी व्यक्तिहरू Getcontact को प्रयोग गरिरहेका छन् ।
यस कथाको भाग हुनका लागि,
अब नि: शुल्क डाउनलोड गर्नुहोस् !
फोन नम्बर मिलाउनुहोस्
प्रतिलिपि अधिकार © 2016-2019 Getcontact LLP। सर्वाधिकार सुरक्षित। Getcontact™ एक दर्ता गरिएको ट्रेडमार्क हो।